Wasiir ka tirsan Maamulka Jubbaland oo geeriyooday iyo Axmed Madoobe oo ka hadlay - Jowhar Somali Leader
Home Somali Wasiir ka tirsan Maamulka Jubbaland oo geeriyooday iyo Axmed Madoobe oo ka...
Wasiir ka tirsan Maamulka Jubbaland oo geeriyooday iyo Axmed Madoobe oo ka hadlay
Waxaa dalka Hindiya ku geeriyooday Wasiirkii Waxbarashada iyo Tacliinta sare ee Jubbaland Macalin Maxamed Ibraahim, kaasoo muddooyinkii u dambeeyay ku xanuunsanayay dalkaas oo arrimo caafimaad loo geeyay, waxaana uu u geeriyooday cudurka Kansarka.
Madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe ayaa war saxaafadeed ka soo saaray geerida iyo tacsida Wasiirkii Waxbarashada Jubbaland, waxaa uga tacsiyadeeyay qoyskiisa iyo eheladiisa isagoo ka sheekeeyay taariikhdiisa.
Axmed Madoobe ayaa sheegay in Macalin Maxamed Ibraahim uu wakhtigiisa intii ugu badnayd geliyay Waxbarida dadka Soomaaliyeed, isagoo door muuqda ka soo qaatay waxbarashada Gobolka Banaadir iyo Jubbaland oo hada uu ahaa Wasiirka Waxbarashada iyo Tacliinta Sare.
Sidoo kale waxaa uu sheegay inuu udub dhaxaad u ahaa xoraynta Jubbaland qaybo badan oo ka mid ah, isagoo xili uu heli karay nalol wanaagsan uu ka doortay in uu nafta u huro sidii uu dhibka Argagixisada uga dulqaadi lahaa dadka ree Jubbaland.
Madaxweyne Axmed Madoobe ayaa intaa ku daray in Macalin Maxamed uu dhismahii Dowladnimada Jubbaland door aan la iloobi doonin uu ku lahaa, isla markaana mar walba u taagnaa Arimaha dib u heshiisinta iyo wadajirka ummadda.
Ugu dambeyn Madaxweynaha Jubbaland ayaa ku dhawaaqay saddex maalmood oo baroor diiq ay galeyso Jubbaland, isla markaana loogu magac dari doono meel munaasab ah, si loogu xusuusto doorkii uu ku lahaa dhismaha Jubbaland,